Waa maxay Gabay? - Hoyga Aqoonta
Nambarka Xubinka : 94
Taariikhduu xubinku is qoray golaha: May 2011
Wadanka : Germany
ka qayb galka: 29
Waxaa la qoray : [ 26-05-2011 ]
Waan idin salaamay dhammaan mudanayaal iyo Marwooyin salaan kadib:
Ma ogtahay Akhristoow in gabaygu yahay boqorka Suugaanta Soomaaliyeed, isla markaana ah midka ugu adag xagga qaafiyadda, Gabaygu waxa uu uga duwanyahay maansada inteeda kale waxa uu leeyahay miisaan ku salaysan Hojis iyo hooris (Qayb hore iyo Qayb dambe), isla markaana waxa shardi ah in ugu yaraan laga helo laba xaraf oo isku mid ah oo midna hojiska ku jiro midna hooriska si loo deel qaaf tiro gabayga, laba xaraf ka yar gabaygaasi waa nuuqus mana deel qaaf tirra, si kastoo gabaygaagu u miisaamanyahay ase uusan deel qaaf tirrayn gabaygaasi waa jacbur, waxaad kaloo arki kartaa gabay sadex dhaca, afar dhaca ama shan dhaca, marka aan ku leeyahay sadex dhac ama shan dhac waa sadex ama afar goor xarafkii oo la soo celiyo, tusaale ahaan aan curiyo baydad ku qaafiyadaysan xarafka "X":
Bayd laba dhac ah: Xikmad wayday Maansaba, Hadday Xaraf tabaysaaye
Bayd Sadex dhac ah: Xasanoow Xasuus gabay, Haddaan Xarafyo Kaa siiyo
Bayd afar dhac ah: Xoolihii Xayeeshiye, Xubnana Daaye Xarakaad
Bayd Shan dhac ah: Xaq la Xiray Xumaan loo Xarbiyay, Xaaluf iyo gaajo
Hadaba waxa aan ku soo af meerayaa dhalinta oo ay dhawaanahan iska dhex gashay suugaanta soomaaliyeed, oo nooc walba oo maanso ah ugu yeera gabay, in ay ogaadaan in aysan ahayn gabay ee waxaa gabay ah maansadii yeelata qaab dhismeedkaas aan kor ku sheegay.
MAHAD ALLAA LEH,
Hal-abuur: Xassan Yuusuf Xaaji (HYH)
Mowduucii hore : Waa maxay Gabay? -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: hassan4w
Warqad gaara u dir hassan4w
Raadi qoraalladuu qoray/qortay hassan4w
Naq Waa maxay Gabay?
Waxaa la qoray : [ 28-05-2011 ]
Ka qayb galkan waxaa horay u qoray oo diyaariyey hassan4w
Xasan waad ku mahadsantahay aqoontan ee su'aal baan ka leeyahay
marka laga tago oo laga reebo
(Hoojis iyo hooris) midda kale ee aad illowdaan gabayaannadiinnu waa inuu
gabaygu ku dhammaado (Shaqal) afafka kale waxaad arkaysaa sharrax waafi ah
iyaga oo iska siinaya. Hadal iyo dhammaantii dad badan baan aqaan oo jecel
tirinta gabayga qaybihiisa kala duwan ee ma shardi baa inuu shaqal ku dhammaado
inuu labo xaraf wato iwm. Marka adoo mahadsan sharrax ma naga siin kartaa.
ka qayb galka : 29
Waxaa la qoray : [ 11-06-2011 ]
Waan idin salaamay akhyaarta sharafta leh, salaan kadib, in kastoo aanan ahayn abwaan balse aan isku dayo inaan sharaxaad yar ka bixiyo su'aasha la i waydiiyay, oo ahayd Gabaygu ma shardi baa in uu ku dhamaado iyo in uu laba xaraf ka koobanyahay ama ka badan.
> Khasab ma aha in baydku ku dhamaado shaqal sida (A,E,U,I , O) balse way u badantahay in uu ku dhamaado inta badana waxaa sababa ayagoo u taagan xiriiriye-yaal kutusaya in tiraabta taraabi ka dambayso taasoo xiriir la leh tii hore balse Khasab maaha, waxaana taas tusaale u ah gabaygaan oo uu tiriyay Abwaan Cabdullaahi Dhoodaan, mar uu ka hadlayay sida loo dayacay badihii kale ee maansada soomaaliyeed ee Hees un laysugu hawlay.
- Aan iskaga qutubo haatan way, igu qodeeyeene
Hadaba waxaan aragnaa baydadka ku dhamaanaya shaqalada in ay yihiin intooda badani kuwo ku tusaya qaab xiriir muujinaya.
> Tan labaad oo ah ma Shardi baa in laba xaraf laga helo, jawaabtu waa haa, waa shardi in laga helo ugu yaraan laba xaraf oo kala saaran miisaanka labadiisa dhinac (Hojiska iyo Hooriska) waana tan aan horay uga hadlay oo aan qoraalka kore ku muujiyay.
Waxaa la qoray : [ 12-06-2011 ]
Su'aal baan ka leeyahay
Xasan maadaama aad tahay
gabayaaga keliya ee golaha
barnaamijcom illaa waqtigan la joogo
sababtoo ah gabayada aad qorto intaas ishaan
kala socday oo waa kuwa xiise gelin leh.
waxaanan ku han weynahay
inaad gabayada iyo maansooyinka
waxyaabo badan nooga dhigto
nagana fahansiiso adoo mahadsan.
Gabayga ma la baran karaa
mise waa mowhibo oo qofku wuu ku dhashaa
Waxaa la qoray : [ 01-07-2011 ]
Su'aashaas rag badan baa horay loo waydiiyay waxayna sheegeen in mawhibana jirto isku taxalujinna lagu hanan karo gabyaanimada, waan filayaa haddii aad tahay qof ka hela gabayada ama maansooyinka aadna isku taxalujiso inaad fahanto qaabka ay u kala baxaan sida ay u dhacaan, miisaamidooda, deelqaaf tirkooda iyo waxyaaba kalaba, waa aad keeni kartaa waanad noqon kartaa qof wax curin kara. Mahadsanid
Gabay(Sidani waa ceeb dheh) Saciid Muuse (ustaadka) Gabayada 2 06-10-2014 06:57 PM
Saciid Muuse Ustaadka( waa maxay qabyaaladi) Saciid Muuse (ustaadka) Gabayada 3 19-05-2014 02:39 PM
Maxay ka dhigantahay kibirley Su'aalaha kumbiyuutarka 3 30-03-2012 12:31 AM
maxay ahayd? Hassan hashi Halxiraale & Xujooyin 9 02-11-2011 02:53 PM
Bishu maanta waa laba waa bilan ayaamuhu Hassan hashi Gabayada 10 08-10-2011 11:48 AM
Saacaddu hadda waa 04:28 AM.